अनलाइन कक्षा तथा दुर शिक्षा अबिलम्ब संचालन गरियोस : डा. रवीन्द्र पाण्डे – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/अनलाइन कक्षा तथा दुर शिक्षा अबिलम्ब संचालन गरियोस : डा. रवीन्द्र पाण्डे
कोरोना संक्रमणको माहामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । विश्वका धेरै देश जसले कोरोना संक्रमण नियनत्रण गर्दै थिए, उनीहरुले स्कुल खोल्दा बालबालिका, शिक्षक हुँदै घरमा रहेका जोखिम बर्गमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हुँदा छोंटो समयमै स्कुल बन्द गरे । उनीहरुले यो बर्ष अनलाइन कक्षा वा दुर शिक्षा अपनाएर बिद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् ।
नेपालमा सरकारको स्पष्ट धारणाको अभाव, हरेक कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने हाम्रो कुसंस्कार तथा संकटमा पनि आफ्नो ब्यापार मात्र हेर्ने अधिकांश स्कुलको लडाइमा अबोध बालबालिका मिचाइमा परेका छन् । सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षसंग बार्ता गरेर अनलाइन कक्षा तथा दुर शिक्षा अबिलम्ब संचालन गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने, पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने, समयमा परिक्षा गर्ने तथा गुणस्तरीय पठनपाठनको ब्यबस्था गर्नको लागि मतान्तर हुनु हुँदैन ।
भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्कमा कति प्रतिशत छुट दिने भन्ने बिषय ३ पक्ष बसेर निर्णय गर्यो भने बिचमा समस्या आउंदैन । आम खपतको राजनीति नगरेर अनलाइन क्लास तथा दुर शिक्षा यथाशिघ्र संचालन गरौँ । विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने हामी कसैको पनि अधिकार छैन । एउटा कुरा नबिर्सौं कि यो पुरै बर्ष स्कुल खोल्न सम्भव नहुन सक्छ । खतरा मोलेर कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिका स्कुल पठाउने छैनन् । अनलाइन क्लास र दुर शिक्षाको यो बर्ष अर्को बिकल्प नहुन सक्छ । डा रवीन्द्र पाण्डे
आगोमा जलेर मृत्युसंग लडिरहेकी मनिसा घरमै रहन बाध्यः उपचारका लागी आर्थिक सहयोगको अपपिल
नेपालमा थप ८० जनामा कोरोना पुष्टि, कसैको गएन ज्यान